Search results for '((health rehabilitation disabled children occupational therapy department childrens cottage kew melbourne) OR (health) OR (rehabilitation)) NOT (id:161480361)' - Journals, articles and data sets - Trove
Language: Shona - Remove
Proceedings of a Community Workshop on Mental Health Research / University of Zimbabwe, Harare City Health Department, Glen Norah Community
Community Workshop on Mental Health Research Harare, Zimbabwe) (1992 :
Languages: English;Shona, [1 other]
Keywords: Depression, Mental - Zimbabwe - Congresses.
1995 WAG Annual Members' Conference report : health as a human right / Women's Action Group
Women's Action Group (Zimbabwe). Members' Conference Mutare Teachers' College) 1992 :
Languages: English;Ndebele (Zimbabwe);Shona, [2 others]
Keywords: Right to health - Zimbabwe - Congresses.; Women's health services - Zimbabwe - Congresses.; Health services accessibility - Zimbabwe - Congresses.
The boy child's voice : a dimension to children's rights, sexuality, sexual abuse, reproductive health, gender based violence and impact of hegemonic masculinities on the boy child in Zimbabwe / [principal researcher Gwatirera Javangwe] ; commissione...
A report on focus group discussions with out of school youth on perceptions and strategies for communicating about AIDS
Eliminate new HIV infections in children, keep mothers alive : Zimbabwe Naional HIV and AIDS Conference, 2011 / Ministry of Health and Child Welfare Zimbabwe in collaboration with the National PMTCT Partnership Forum, National AIDS Council and Elizab...
Zimbabwe. Ministry of Health and Child Welfare
Sanitation and water in rural Zimbabwe / Ministry of Health and Child Welfare
Wize up : sexual reproductive health and rights radio talkshows
Positive talk. the situation in Zimbabwe / produced by Video Audio Network ; director, Farai Matambidzanwa